Ozi - Ngwa nke teknụzụ igbutu ultrasonic na ngwaahịa eletrọniki
Abstract: A na-ejikarị nkà na ụzụ Ultrasonic eme ihe na ụlọ ọrụ. Akwụkwọ a ga-ewebata ụkpụrụ nke mkpụchasị ultrasonic, ma jikọta ihe atụ nke ngwaahịa kọmputa akọwapụtara iji tụnyere nsonaazụ nke ịkpụchasị igwe na ịcha laser, ma mụọ ngwa nke teknụzụ ọnwụ ultrasonic.
· Okwu mmalite
Nbelata Ultrasonic bụ teknụzụ dị elu maka ịcha ngwaahịa thermoplastic. Ultrasonic ịcha nkà na ụzụ na-eji ultrasonic ịgbado ọkụ bee workpieces. Ngwongwo na-ekpo ọkụ nke Ultrasonic na ihe ndị dị na ya dịkwa mma maka gburugburu mmepụta akpaghị aka. A na-eji teknụzụ nke Ultrasonic eji azụmaahịa na ngwa eletrọnịkị, akụrụngwa, ike ọhụrụ, nkwakọ ngwaahịa, ọgwụ, nhazi nri na mpaghara ndị ọzọ. Site na mmepe ngwa ngwa nke akụ na ụba ụlọ, ngwa ntinye ga-abawanye ma saa mbara, yana ọchịchọ dị n'ahịa ga-abawanye. Ya mere, ultrasonic ịcha nkà na ụzụ nwere nnukwu mmepe na-atụ anya.
· Mechanical ọnwụ
Mechanical ọnwụ bụ nkewa nke ihe site n'ibu n'aka na nkịtị okpomọkụ, dị ka akpacha ajị, sawing (hụrụ hụrụ, wafer hụrụ, ájá hụrụ, wdg), -egwe ọka na na na. Ntucha igwe bu uzo ndi mmadu ji eme ihe ojoo ma obu nkpu oyi. Ihe kachasị mkpa bụ na a ga - edozi ihe a ga - arụ iji na - apịa ya ka ọ belata usoro nkewa. Usoro nke ịkpụchasị igwe nwere ike ịkekọrịta ụzọ atọ dị nro: 1. mgbanwe nrụrụ mgbanwe; 2. plastic deformation ogbo; 3. mgbaji ọkpụkpụ ogbo
· Laser ọnwụ
3.1 ofkpụrụ nke ịcha laser
Nchapu laser na-eji mgbatị laser dị elu nwere nnukwu ọkụ iji mee ka ọrụ ahụ pụta ìhè, na-eme ka ihe ọkụkụ ahụ ruo ọtụtụ puku mmadụ ruo iri puku Celsius na obere oge, na-ekwe ka ihe ndị ahụ na-agbaze ngwa ngwa, gbazee, gbapụ, ma ọ bụ gbanye ọkụ, mgbe ị na-eji osisi Igwe ikuku a na-agba ọsọ ọsọ na-agbapụta ihe a wụrụ awụ, ma ọ bụ ihe a na-agbapụta ọkụ na-agbapụ site na mgbawa ahụ, si otú ahụ belata ihe arụ ọrụ iji mezuo nzube nke ịkpụ ihe ahụ. Laser ọnwụ bụ otu n'ime ọkụ ọnwụ ụzọ.
3.2 Laser ọnwụ atụmatụ:
Dị ka usoro nhazi ọhụụ, a na-eji nhazi laser eme ihe na ụlọ ọrụ eletrọniki n'ihi uru nke ezi, ngwa ngwa, ọrụ dị mfe na ogo dị elu nke akpaaka. E jiri ya tụnyere usoro ọdịnala ọdịnala, igwe ọnwụ laser abụghị naanị ọnụ ala, obere oriri, yana n'ihi na nhazi laser enweghị nrụgide nrụgide na mpempe akwụkwọ, mmetụta nke ịcha ngwaahịa ahụ, nkenke na ọnwụ ọnwụ dị oke ezi, na ime ihe adịghị mma na mmezi dị mfe. Njirimara dịka: Thedị ngwaahịa nke igwe laser na-acha edo edo adịghị, akpaka akpaka adịghị atọpụ, enweghị nrụrụ, enweghị ike, nha ahụ na-agbanwe agbanwe ma zie ezi; nwere ike belata ụdị ọ bụla dị mgbagwoju anya; arụmọrụ dị elu, ọnụ ala, ihe eserese kọmputa Ọ nwere ike belata akwa ọ bụla n'ụdị ọ bụla. Ọsọ ọsọ: N'ihi njikọ nke laser na teknụzụ kọmputa, ndị ọrụ nwere ike imepụta ihe osise laser wee gbanwee eserese ahụ n'oge ọ bụla ọ bụrụhaala na e mere ha na kọmputa. Laser ọnwụ, n'ihi na-adịghị ahụ anya doo dochie ọdịnala n'ibu mma, n'ibu akụkụ nke laser isi enweghị kọntaktị na-arụ ọrụ, na ọ gaghị ọkọ na-arụ ọrụ elu n'oge ọrụ; na laser ọnwụ ọsọ bụ ngwa ngwa, na mbepụ bụ ezigbo onye ewepụghị, n'ozuzu dịghị mkpa sequdi nhazi; enweghị nrụgide igwe na mbepụ, enweghị ịkwa akwa; oke nhazi nkenke, mmeghari ohuru, enweghi mmebi nke ihe; Mmemme NC, nwere ike ịhazi atụmatụ ọ bụla, nwere ike belata efere niile na nnukwu usoro, ọ dịghị mkpa ịmeghe ebu, echekwa oge echekwa.
· Ultrasonic ịcha
4.1 Ultrasonic ịcha ụkpụrụ:
Site na imepụta pụrụ iche nke ịgbado ọkụ na isi, a na-agbanye mgbado ọkụ na nsọtụ nke ngwaahịa plastik, na ultrasonic vibration na-eji ebipụ ngwaahịa iji nweta nsonaazụ ọnwụ site na iji ultrasonic vibration arụ ọrụ ụkpụrụ. Dị ka ọ dị na usoro nhazi nke ọdịnala, ụkpụrụ bụ isi nke teknụzụ ọnwụ nke ultrasonic bụ iji ihe na-emepụta ihe na-emepụta ihe eletrọniki na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-eme ka ihe na-eme ka ihe na-eme ka ihe na-eme ka ihe na-eme ka ọ ghara ịmalite. ịcha isi. A na-agbanwe vibration nke ultrasonic ka ọ bụrụ ihe na-eme ka ọ dị n'otu ugboro, wee gbasaa site na resonance iji nweta njupụta zuru oke na ume (ike) iji mezuo ihe ndị a chọrọ iji belata ihe a na-arụ. N'ikpeazụ, a na-ebute ike ahụ na isi ịgbado ọkụ, mgbe ahụ, a na-ebipụ ngwaahịa ahụ. Uru nke nchawa ahụ dị mma ma ọ bụghị gbawara.
Ultrasonic ịcha vibration usoro a tumadi ekewet nke ultrasonic transducer, ultrasonic mpi na ịgbado ọkụ isi. N'etiti ha, ọrụ nke transducer ultrasonic bụ iji gbanwee mgbaàmà eletriki ka ọ bụrụ akara ngosi ụda; mpi bu ihe di mkpa nke ultrasonic nhazi akụrụngwa. O nwere oru abuo abuo: (1) itinye uche - ya bu, a na-emewanye ihe mejuputara igwe ma obu ngwa ngwa nke ike, ma obu na-etinye ike na obere oria radieshon maka ichikota ike; (2) acoustic ike n'ụzọ dị irè bufere ibu- Dị ka a n'ibu impedance Ntụgharị, impedance kenha a rụrụ n'etiti transducer na now ibu ekwe ka ultrasonic ume na-ebute site ná site transducer ka ibu rụọ ọrụ nke ọma.
4.2. Atụmatụ nke ultrasonic ọnwụ:
Mgbe ebili mmiri ultrasonic na-enwe obi ụtọ iru okpomọkụ dị elu, ngwaahịa ahụ na-agbaze n'ihi oke okpomọkụ intermolecular excitation na esemokwu dị n'ime.
Ultrasonic ịcha atụmatụ. Mbelata nke Ultrasonic nwere uru dị mma na mgbatị siri ike, mgbatị ziri ezi, enweghị nrụrụ, enweghị mgbape, fluffing, spinning, wrinkling na na. Izere “igwe nchacha laser” nwere ọghọm nke mbepụ siri ike, ileba anya, pilling, wdg. Uru nke mkpụmkpụ ultrasonic gụnyere: 1. Ọsọ ọsọ ọsọ, yana oge okirikiri nke na-erughị otu nke abụọ. 2. A naghị emesi akụkụ plastik ike; 3. Ebe a na-egbutu ya dị ọcha; 4 Ọtụtụ ebe ga-ebipụ n'otu oge maka nkewa akpaaka 5 Mbepụ nke Ultrasonic abụghị mmetọ.
Kedu ụdị ihe a na-egbutu iji ultrasound? Ọrụ kacha mma maka isiike thermoplastics (polycarbonate, polystyrene, ABS, polypropylene, naịlọn, wdg). Ha na-agafe ike dị ike karịa nke ọma. Mgbatị siri ike (modulus nke elasticity) thermoplastics dị ka polyethylene na polypropylene na-enweta ike ọrụ ma nwee ike inye nsonaazụ na-ekwekọghị ekwekọ.
E jiri ya tụnyere mmetụta nke ịkpụchasị igwe, ịchacha laser na ịkpụchasị ultrasonic, ultrasonic dị mma maka ịkpụ ntị nke ngwaahịa ahụ, na mmetụta dị mma, na-ezute ihe ndị achọrọ maka ịcha ngwaahịa, na arụmọrụ nke mkpụchasị ultrasonic bụ nke kachasị elu. Ultrasonic ịcha bụ ezigbo ihe ngwọta nke ihe ndị achọrọ nke ịkpụ ngwaahịa.
Site na nyocha nke omimi nke nyocha nke ultrasonic, a kwenyere na n'ọdịnihu dị nso, a ga-etinye ya n'ụzọ zuru ezu.